Ride Kiddie, Umatshini weMidlalo yaBantwana, Umatshini woMdlalo weSipho - uMeiyi
into Malunga nathi
I-Guangzhou Meiyi iThekhnoloji ye-Elektroniki Co, Ltd. yasekwa ngo-2014, ibekwe ePanyu Guanghzhou, ikomkhulu lomdlalo womdlalo wase China. Siyinkampani yezixhobo zokuzonwabisa egxile kuzimeleyo, uphando, uphuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo. Umzi-mveliso ugubungela ummandla osisikwere seemitha ezili-1500, unendawo yokubonisa eyi-3000, Iimveliso zethu eziphambili zibandakanya ingqekembe….
Umsebenzi kuthetha uMgangatho oPhezulu
Umatshini womdlalo wabantwana
Umatshini womdlalo webhaso
Umatshini womdlalo weHockey
Umdlalo womdlalo wezemidlalo
Imidlalo yokubaleka yesimulator
Imidlalo yokudubula yesimulator
Umatshini womdlalo weArcade
Ukudubula imidlalo yebhola
Imidlalo yetikiti Lottery
Imidlalo yemali yokuqhuba
Kule minyaka, siye sanikezelwa ekuphuhliseni iimveliso ezahlukeneyo. Ukugxila kwethu kwi-R & D, ukuqinisekisa ukuba sinika abathengi bethu umgangatho ophezulu kunye neemveliso ezintsha.
Sifumene igama elihle phakathi kwabathengi bethu .Siza kushwankathela amava aphumeleleyo, sikhokele imfashini, kunye nezinto ezintsha zeshishini lokuphuhlisa iimveliso ezizodwa.
Nekhredithi yeshishini yesandi, inkonzo ebalaseleyo emva kokuthengisa, abasebenzi bethu abanamava apheleleyo kolu shishino bahlala besenza zonke iinzame zokusombulula iingxaki kwaye bafeze ukoneliseka okuphezulu kwabathengi.
Sijonge phambili ekusebenzisaneni nabathengi abaninzi kwihlabathi liphela kuphuhliso olufanayo kunye nezibonelelo ezifanayo. Wamkelekile i-OEM kunye ne-ODM yokuhambisa kunye nokusasaza kwihlabathi liphela ukutyelela kunye nokusebenzisana nathi!
Iingcebiso zeBlog malunga nokuVuselelwa kweKhaya
20-12-15 / ngomlawuli
Uyenza njani ipaki yokonwabisa abantwana bakho mor ...
1. Isitayile somxholo Kukho iintlobo ezahlukeneyo zemixholo yokuhombisa kwepaki yabantwana, enjengolwandle, ihlathi, iilekese, indawo, umkhenkce nekhephu, ikhathuni njalo njalo. Ngaphambi kokuhonjiswa, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ebanzi kunye nophando lokumisela ukuba loluphi uhlobo ...
Kutheni oomatshini bokwenza unodoli bethandwa kangaka?
Claw oomatshini bonodoli kunye nazo zonke iintlobo zoomatshini bezipho abathengisa ngoku phantse kuyo yonke indawo. Ukongeza kwiivenkile zomatshini woonopopi, bakwiiivenkile zeemarike, ecaleni kweendawo zokubukela iimovie, kwiivenkile zevenkile zeempahla zabantwana okanye kwiivenkile zokutyela, nakwisango le-bouti ...
Ingqungquthela yeHlabathi yeHlabathi yeHlabathi kunye ne-Ex ...
Ngomhla kaNovemba 28,2020, i-13th yeZhongshan Nwabisa Fair China ibibanjelwe e-Zhongshan Expo Centre / kwiNdibano yeHlabathi yeHlabathi kunye neZiko leMiboniso. Ngomhla kaNovemba 28,2020, umdlalo we-13 weZhongshan International kunye neMidlalo yokuzihlaziya eChina (Zhongshan) kwiNkcubeko yeHlabathi yeNkcubeko kunye nezoKhenketho ...